Faah Faahin Cusub oo laga helay qaabkii loo dilay Xildhibaan C/laahi + Sawir… |
Faah Faahin Cusub oo laga helay qaabkii loo dilay Xildhibaan C/laahi + Sawir…
Waxay faah faahin ka soo baxaysaa dil galabta Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir loogu gaystay Allaha u naxariistee Xildhibaan C/laahi Xuseen Maxamuud, oo ka tirsanaa Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya.
Kol hore waxaa soo baxaayay in Xildhibaanku uu ku geeriyooday qarax loogu xiray gaarigiisii gaarka ahaa, balse waxaa dib dambe ka soo baxday in dabley hubeysan ay gaarigiisii ku horgooyen gaari kale, rasaas xoogana ay oodda kaga qaadeen.
Goobjooge, ayaa sheegay in raggii weerarka gaystay ay markii hore dhowr xabo bambada gacanta laga tuuro, ay ku tuureen gaarigii uu Xildhibaanku la socday, markaasi ka dibna ay gaariga ku horjareen gaari kale, rasaas xoogana ay huwiyen.
Xildhibaan Prof. Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah Mudanayaasha Baarlamaanka Somaliya, ayaa sheegay in dabley hubeysan ay gaari ku horgoysay gaarigii uu Xildhibaanku la socday, ka dibna ay rasaas ku furtay.
Xildhibaan Dalxa waxa uu laamaha ammaanka uu ka dalbaday inay sharciga horkeenaan raggii dilka gaystay, wuxuuna saluugay in goob ay ku badan yihiin Ciidamada Dowladda dil laga gaysto, kuwii gaystayna ay baxsadaan.
Gudoomiyaha Degmada Wadajir, Axmed Cabdulle Afrax oo ka hadlay dhacdadaasi, ayaa sheegay in dilku uu u dhacay si kedis ahayd, isla-markaana ay kuwii weerarka gaystay u suurta gashay in ay baxsadaan.
Gudoomiyaha waxa uu xaqiijiyay in la helay raadad ka dhan ah kuwii dilka gaystay, isla-markaana ay ku daba jooggaan laamaha amniga Gobolka Banaadir. Wuxuuna rajo badan ka muujiyay in gacanta lagu soo dhigi doono dembiile-yaasha.
Marxuumka, ayaa waxaa la weeraray xilli uu kulan kaga qaybgalay Xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho, kuna sii jeeday hoygiisa oo ku yaala Degmada Wadajir.
Xildhibaanka la dilay, ayaa waxaa dhalay allaha u naxariistee Xuseen Maxamuud Muuse (Xuseen Baantuu), oo ka tirsanaa Baarlamaanka Somaliya, dhawaana ku geeriyooday Magaalada Muqdisho, markii uu dhiigga ku kacay.
Xildhibaan C/laahi, ayaa dhawaan loo dhaariyay xilka Xildhibaanimo, isagoona buuxiyay booskii uu aabihii ka geeriyooday muddo billo laga jooggo.
Muqdisho waxaa sanadkan lagu dilay dhowr ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka. Wuxuuna dilka Xildhibaankan noqonayaa midkii ugu dambeeyay oo Caasimadda ka dhaca.